डोल्पामा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा- देश - कान्तिपुर समाचार
डोल्पामा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा
डोल्पा — विगतका निर्वाचनमा जिल्लाभर मूलत: त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो । यसपटकको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भने अघिल्ला चुनावको तुलनामा वाम गठबन्धनका प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक गठबन्धनभन्दा निकै मजबुत देखिएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाभर एमालेको मत ७ हजार ४ सय ७०, माओवादी केन्द्रको २ हजार ३ सय २६ र स्वतन्त्रको ८ सय ६२ मत थियो । स्थानीय तह निर्बाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका पनि एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् । तीनवटै मत जोडदा वाम गठबन्धनको पक्षमा १० हजार ६ सय ५८ हुन्छ । कांग्रेसले जिल्लाभरिबाट ३ हजार १ सय ९५ मत प्राप्त गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रको साथ थियो । जिल्लामा राप्रपालगायत अन्य पार्टीले कांग्रेसलाई सघाएका छैनन् ।
अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका धनबहादुर बुढाको ६ हजार ९ सय ८५ र एकीकृत माओवादीकी सत्य पहाडीको २ हजार ७ सय ६२ मत थियो । यस्तै कांग्रेसका सुरेशबहादुर शाहीको ९ सय ६५ मत ल्याएका थिए । । उक्त निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका र अहिले कांग्रेस प्रवेश गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार अंगदकुमार बुढाले १ हजार ५ सय ३४ मत ल्याएका थिए । गाउँगाउँमा वाम गठबन्धन र कांग्रेस उम्मेदवारको चुनावी प्रचारप्रसारले तीव्रता लिएको छ । कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बुढाले माथिल्लो डोल्पामा प्रचार सकेर सदरमुकाम आइपुगेको बताए ।
वाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमालेका धनबहादुर बुढा तल्लो डोल्पामै व्यस्त छन् । उनी शुक्रबार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ९ को बन्तडीमा थिए । १ (क) को प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार वेगमसिंह ठकुरी ठूलीभेरी नगरपालिकामा व्यस्त छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७४ ०८:१८
दैलेख — स्थानीय भगवतीमाई गाउँपालिकाबाट ५ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । एकै गाउँपालिकाबाट धेरैको उम्मेदवारी परेपछि स्थानीयवासीमा कसलाई भोट दिने र कसको प्रचारमा जाने भन्ने अलमल भएको छ ।
दुई क्षेत्र रहेको दैलेखस्थित भगवतीमाई गाउँपालिका क्षेत्र नं. १ (ख) मा पर्छ । बाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ भगवतीमाई गाउँपालिका १ पगनाथका एमालेका अम्मरबहादुर थापा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठेका छन् । सोही गाउँपालिका ३ वासी माओवादी केन्द्रका धर्मराज रेग्मी क्षेत्र नं. १ (क) का प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार हुन् । वडाभैरवका दीपककुमार शाही लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार छन् ।
एमालेमा लामो समय सक्रिय उनी स्थानीय तह निर्वाचनपछि राप्रपा प्रवेश गरेका थिए । उनलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएको छ । शाहीले एमालेका अध्यक्ष रविन्द्रराज शर्मासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट भगवतीमाई १ का झवीराज खत्री क्षेत्र नं. १ (क) बाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार छन् । यही गाउँपालिकाका गीताकुमारी खत्री जनमोर्चाबाट प्रदेशतर्फ समानुपातिक सूचीमा छिन् ।